လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve,China လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve Supplier & Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve
လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve, လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Bag Dust Collector သည်ဖုန်မှုန့်ပါ ၀ င်သည့်ဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ဖုန်မှုန့်ပါသောဓာတ်ငွေ့ကိုစစ်ထုတ်သည့်ခြောက်သွေ့သောဖုန်မှုန့်စက်ရုံဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖုန်မှုန့်ပါသောဓာတ်ငွေ့သည်အိတ်မှဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူထဲသို့ ၀...
ရေအသုံးပြုရန်အတွက်ဒဏ်ခံနိုင်သည့်ထိုင်ခုံမဟုတ်သောအဆို့ရှင် ၁၅၀ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve ပေးသွင်း
valve ပိတ်ဆို့ခြင်းရွှံ့, ပျော့ဖတ်, ပျော့ဖတ်, caustic soda, ဒါမှမဟုတ်ကာဗွန်အခါသမယပိတ်ဆို့ထားသည်အထူးသဖြင့်သောအခါ, ဘုံအမှားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လတ်သည်စင်ကြယ်မဟုတ်ကြောင်း မှလွဲ. ပိုက်အတွက် plug ကို plugging ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်း function ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်မျှမ plugging ဆို့ရှင်ပစ္စုပ္ပန်မှာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သာ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်း function ကိုတိုးတက်စေရန်အားလုံးရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ဖြေအမြင်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးအမှတ် မှစ. , ဖြောင့်လေဖြတ်ခြင်း၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း် S နှင့်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုးရွားဖြစ်ရပါမည်။ လတ်အလျားလိုက်ဦးတည်ချက်ကနေအဆို့ရှင်သို့စီးဆင်းပြီးနောက်ကြောင့်ဒေါင်လိုက်စီးဆင်းပြီးမှတဖန်ထွက်စီးဆင်း, ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုတည်းထိုင်ခုံအဆို့ရှင်ကိုယူပါ။ ဒါဟာလှည့်နှင့်လှည့်များ၏ရှုပ်ထွေးစီးဆင်းမှုလတ်များအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုအာကာသများကို whirlpool သေပြီဇုန်အများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်တက်ပိတ်ဆို့ဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်, အဆိုပါလက်များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အဆို့ရှင် plug ကိုကနေနှစ်ခုအကြားကွာဟချက်ကိုသေးငယ်သည်, အချို့မစင်ကြယ်သောအမှုအရာယိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ အဟောင်းကိုတစ်ခုတည်းထိုင်ခုံအဆို့ရှင်နှင့်နှစ်ဆထိုင်ခုံအဆို့ရှင်မှာကြည့်ပါ။ အောက်ပိုင်းအဖုံး၏ညှနျကွားလတ်ပြွီးဘယ်မှာသေဇုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုအရာစုပြုံရန်လွယ်ကူများမှာ Precipitated, ထိုအဆို့ရှင် core ကိုအောက်ဖက်အလွန်ခက်ခဲများနှင့်အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်စေတဲ့အရပျ၌မဟုတ်ပါဘူး။
B က။ အဆိုပါထောင့်လေဖြတ်ခြင်းအဆို့ရှင်သည်ထောင့်လေဖြတ်ခြင်းမှတဆင့်အလတ်စား၏အဆို့ရှင်ဖြောင့်ထွက်ဖြစ်ဟန်တိုက်ရိုက်လေဖြတ်အဆို့ရှင်များ၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းရှုပ်ထွေးနှင့်အထက်နှင့်အနိမ့်လမ်းညွှန်ကဒ်အတွက် plug ရန်လွယ်ကူကြောင်းပြဿနာကိုအောင်မြင်သောအရှိဆုံး ပုံမှန် "အို" အမျိုးအစားပဲဖြောင့်ပိုက်ကဲ့သို့၎င်း၏ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး, ဒုတိယစားပြီး rotary အဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ၏ 2. အမျိုးအစားရွေးချယ်ရေး
လတ်ဟာအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းအခါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကွာဟမှုသေးငယ်သည်မှန်လျှင်, တူညီတဲ့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဧရိယာအခွအေနေအောက်မှာ, စင်ကြယ်လတ်ဖြတ်သန်းရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ခုံဖိနပ်ရန်လွယ်ကူ၏, အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုပိတ်ဆို့ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အဆိုပါ plunger အမျိုးအစားအဆို့ရှင် core ကိုအဘို့, အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဧရိယာအညီအမျှအဆိုပါလုံးပတ်အပေါ်ဖြန့်ဝေနေသည်, ဒီတော့ကွာဟချက်အသေးဆုံးဖြစ်၏ ကွာဟချက်ဟာ plunger အမျိုးအစားထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အမှုန်များဖြတ်သန်းဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာပြီးတော့ပြတင်းပေါက်အမျိုးအစားအဆို့ရှင် core ကို, ပြတင်းပေါက်ပေါ်မှအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဧရိယာရှိပါတယ်။ ဒါဟာပိုပြီးစုစည်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဧရိယာနှင့်ပိုမိုကြီးမားသည့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကွာဟမှု, ပိုကောင်းဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောပုံမှန်ထုတ်ကုန်a"က V ကို" type ကိုရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အသေးစားဖွင့်လှစ်အလုပ်အတွက်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဧရိယာ၏ "V ကို" type ကိုအပြည့်အဝဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားသာချက်များ၏ "V ကို" type ကိုပြသသောကဒ်ပိတ်ဆို့ဖို့ပိုပြီးစုစည်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ခက်ခဲသည်။
ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် 3. ဘုံအစီအမံ:
အစဉ်အလာစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတိုးတက်အောင်နှင့် linear စီးဆင်းမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအပြင်အချို့သောဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအစီအမံထိုကဲ့သို့သောပျော့ဖတ်, ပျော့ဖတ်, slurry, ပျော့ဖတ်နှင့်အခြားမီဒီယာသကဲ့သို့, အလတ်စားဘို့မွေးစားနိုင်ပါတယ်။
1) စီးဆင်းမှု၏ချောမွေ့စီးဆင်းမှု, ပိုမိုမျှတပိုကောင်းအသွင်ကူးပြောင်းရေး။ အထူ slurry မြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှု, ဆင်းရဲသောလျော့ပြေလွယ်ကူအခြေချ၏အားသာချက်များ၏အမြင်တွင် shell ကိုဖွဲ့စည်းပုံကတဆင့်တိုက်ရိုက်အကြောင်း, shell ကိုအနားကွပ်၏အချင်းဖြစ်ပြီး (စီးဆင်းမှုခုခံ minimize နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မွေးစားသဖြင့်, ထွက်ပေါက်ဟာထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည် သွင်းကုန်) ။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည်အထူ slurry နှင့်အခြားအခါသမယများအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ခဲ့လျှင် 2) တွက်ချက်မှုအရသိရသည်, အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံအချင်းဟာအဆို့ရှင်ကိုယ်တိုင်က၏ "Self-သန့်ရှင်းရေး" function ကိုတိုးတက်စေရန်အဖြစ်ဒါကြောင့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ port ရဲ့စီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
3) အဆို့ရှင်ပလ္လင်ရှေ့မှာလာကြတယ်နှင့်သိမ်းကျုံး interface ကို add, နှင့်အခွံ၏အတွင်းလိုင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ဖို့မြင့်မားသောဖိအားဝေဟင်သို့မဟုတ်ရေကိုအသုံးပြုပါ။
4) လုံလောက်သော torque နှငျ့ခှနျအားနဲ့ actuator ကိုသုံးပါ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဖုန်မှုန့် Collections , စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulfurization ကောက်ခံရေး , filter စာနယ်ဇင်း , ဖုန်မှုန့် Filter ကို Bag , ဖုန်စုဆောင်း Fittings